ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: စင်္ကာပူက ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ
ကျမတို့ ပြင်သစ်မှာတော့ ၇ ၇က်နေ့ မှာပြမယ်။
For our burmese people , who don't have chance to express, we will do for them
new york မှာ မနေ့က ၂၉ ရက်နေ့က ဒေါက်တာဦးစိန်ဝင်း မိန့်ခွန်းပြောတယ်....း)
စလုံးမှာ မြန်မာတွေ နည်းတာမှ မဟုတ်တာ၊ ဒါပေမယ့် မနေ့လာတာ လူတော်တော်နည်းတယ်...
ကျနော် ခံယူထားတာ၊ လက်ရှိ တွေ့ကြုံခံစားနေရတာတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တော့...
နိုင်ငံရေးကို တကယ့်ကို နင့်နင့်နဲနဲ စိတ်ပါဝင်စားမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသားအင်အားတွေ အများကြီး လိုနေတယ်၊ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုတွေ လိုနေတယ်...
အင်အားဖြည့်တင်းကြဖို့ သိပ်ကို အရေးကြီးတယ်...
စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး လုပ်ကြဖို့ သိပ်ကို အရေးကြီးတယ်...
ကိုပေါတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကို လေးစားတယ်ဗျာ...
It's about 70 people turn up yesterday at speakers' corner to support the event and shout together " No To Burma's Sham Election "
" No To Burma's Sham Election "
and hope their voice be heard!!!!
ဂုဏ်ယူပါတယ်ကိုပေါ။ အများစု ပါဝင်နိုင်ရင် ပိုကောင်း ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဆန်ဒပြတဲ့အတွက် အင်မတန် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ7ရက်နေ့ မှာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မဲမပေးဘဲ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး တစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲ ရွေးကောက်ပွဲကို ကန့် ကွက် ကြရအောင်လားဗျာ
ပထမဦးဆုံး ပြောချင်တာက မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ တာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။
ဒုတိက အနေနဲ့ သိရသလောက် စင်္ကာပူနိုင်ငံက တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ အားလုံးလိုလိုဟာ နိုင်ငံ့ အရေးကို လုပ်ဆောင်နေသူတွေသာ ဖြစ်ပြီး အချိန်တန်ရင် ကိုယ်လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကျ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနဲ့ပဲ ရပ်တည် ရှင်သန်ကြမှာဖြစ်ကာ မိမိတို့ ကိုယ်ကျိုး တစ်စုံတစ်ရာအတွက် လုပ်ဆောင်နေသူတွေ မဟုတ်တဲ့အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး အတူတစ်ကွ လုပ်ဆောင်ကြဖို့ကသာ အရေးကြီးပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံက Speaker Corner မှာ တရားဝင် ၀င်ရောက် အင်အားပြရုံ၊ ထောက်ပံကူညီရုံ အနေအထားမှာတောင် ခေါင်းဆောင်စောင့်၊ မင်းလောင်းစောင့်မျှော်နေပြီး ဘယ်သူကြောင့် ဘယ်ဝါ့ကြောင့် အလုပ်ကြောင့် အစရှိသည်ဖြင့် မလာချင်/ဖြစ်ဘူးလို့ ဆင်ခြေပေးခြင်းဟာ အမှန်တော့ အင်မတန် ရှက်စရာကောင်းတဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းကို ၀န်ခံလိုက်ခြင်းပါပဲ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် ဆန္ဒပြနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
မိမိကိုယ်တိုင် ပါဝင် လုပ်ဆောင်မှုက ပထမဦးဆုံး စတင်ရမယ့် ခြေလှမ်းပါ။ အဲ့ဒီနောက် စုစုစည်းစည်းနဲ့ အင်အားတစ်ခု ဖြစ်လာရင် လူအများနှစ်သက်တဲ့သူ၊ လေးစားတဲ့သူ အလိုလို ပေါ်ပေါက်လာမှာပါ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေသူ အများစုဟာ ကိုယ်ပိုင် အသိဥာဏ် တန်းသူရည်တူ ရှိကြသူတွေများပါတယ်။ မိမိ အသိပညာ၊ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆ၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေကို မိမိနိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် အနည်းနဲ့ အများ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်သူတွေပါ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာကတည်းက Overseas Burmese Patriots၊ လမ်းပြကြယ်၊ အိုးဝေ အပါအ၀င် အဖွဲ့၎၊၅ ဖွဲ့လောက် နဲ့ တစ်သီးပုဂလ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ စုစုစည်းစည်း လုပ်ဆောင်လာခဲ့တာပေမယ့် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို အားလုံး ကိုယ်စီကိုယ်ငှ တာဝန်ခွဲယူမှု၊ အပြန်အလှန် လေးစားနာလည်မှု၊ မိမိတို့အားလုံးရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက် ဘာလဲဆိုတာ သိရှိပြီး အကောင်အထည်ပေါ်ရေးကိုပဲ အလေးထား လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာချည်းပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ OBP မှာဆို ခေါင်းဆောင်လုံးဝ မရှိခဲ့ဘူး။ ရှိသင့်ရှိထိုက်သော အပြန်အလှန် လေးစားနားလည်မှု၊ လုပ်ငန်းတာဝန် ခွဲဝေပြီး စုစည်းပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာချည်းပဲ။
ဒါကြောင့် အကုန်လုံး ပါဝင်လာအောင် ခေါင်းဆောင်ကောင်း (သို့) မိမိနှစ်သက်သော လူ ဦးဆောင်မှုကို စောင့်မျှော်ခြင်းဟာ မဖြစ်သင့်သော ကိစ္စတစ်ရပ်ပါပဲ။
ပြည်တွင်းမှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်း လိုအပ်တာ မှန်ပေမယ့် စင်္ကာပူနိုင်ငံလိုမျိုးမှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းထက် မိမိတိုင်းပြည်နဲ့ ဒုက္ခမျိုးစုံ ခံစားနေရသော မိမိနှင့် မိမိ ဆွေမျိုးသားချင်းများ အပါအ၀င် မြန်မာပြည်သူများအတွက် တစ်ခုခု လုပ်ချင်သော စိတ်ဆန္ဒကသာလျှင် အဓိက ကျပါတယ်။
နဂိုးချုပ်ရရင် မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းမှာ အစစအရာရာ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံပြီး လှုပ်ရှားနေသူတွေကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ ထောက်ပံ့ကူညီသောအားဖြင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ တရားဝင် ဆန္ဒပြလို့ ရသမျှ ရှားရှားပါးပါး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ နိုင်ငံသားကောင်း ပီသစွာ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်အင်အားပြကြဖို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
Credit to Ko Peter .
Good comment , Lun Lunn . Thanks.
Don't worry, all myanmar ( from singapore ) are not free because they are buying tickets for IC music live show at December 19 , 2010, there will be full of Myanmar..very very sure
(၁)လုပ်ရပ် အနေနဲ့အမတန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
(၂)publicity အားနည်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လူသိအရမ်းနည်းတယ်။ ဒါကြောင့် လူပါဝင်မှု (ထင်တာထက်)နည်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုပေါဘလော့ဂ်တခုမှာပဲ ဒီအကြောင်းတွေ့ ရတယ်။
်(၃)အနီရောင် ၀တ်ရန် တိုက်တွန်းခြင်းဟာ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို နဲ့ခပ်ကြောက်ကြောက်ပါဝင်လာမယ့် လူအများစု(ကျနော်တို့ လို) လူတွေကို နောက်တွန့် စေပါတယ်။
ကျနော်တို့ ကို ကြိုက်သလို ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။
ဂဂ မှာကြည့်ပါ။ အစပိုင်းမှာ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့လမ်းဘေးကနဲ့လိုက်ကြည့်တဲ့သူက အများစုပါ။ နောက်မှ လမ်းပေါ် သူတို့ လဲ ပါလာကြတာပါ။
ဆိုလိုတာက စ ကတဲ က အများစု က နဖူးမှာ ခွတ်ဒေါင်း အလံစည်းပြီး ၀င်လာကြတာမဟုတ်ဘူး။
လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲ နုိုင်ပါတယ်။ (အကြံပြုရုံပါ။)
Social network : Facebook, SMS , email Media : Moemaka , Burmatoday , The online citizen
Blog : Ko Paw
Wearing RED --
Eventhough it is encouraged to wear, it is totally the choice of each individuals. A number of Burmese came without wearing red color on that day too. ( Note : The organizers didn't say that you cannot come if you don't wear red )
So, my point is one's own wish is the most important thing to participate or support any cause. If one has strong desire to take part, nothing can really hinder.
If we don't have enough desire to do something, then we can find many reasons to justify ourselves why we can't do this or why we can't do that. It'saharsh truth.
But organisers and activists should not expect all the participants to do like them.
What if this event is organised midnight in weekdays? How many of activists will turn up?
Will you turn up too?
Why many people turned up in Toa Payoh Burmese Temple when we paid respect to Uncle U Tin Oo?
"စလုံးမှာ မြန်မာတွေ နည်းတာမှ မဟုတ်တာ၊ ဒါပေမယ့် မနေ့လာတာ လူတော်တော်နည်းတယ်..."
to ask asylum after shouting "Doe Ayay" in speaker corner.
You cannot get welfare if you lost your job in Singapore.
Yes, strongly agreed above comment .We are struggling and rushing for our family survival in SG .I we loose our life here , who will take over our generation ?I supported to anti-goverment event before , but now I can't because we are struggling to get enough time for money,eating & sleeping in SG .But,I also don't go to Embassy to vote because of busy and forget it .But,i don't against this election , i will support whatever result of this poll .One day i m going back to Myanmar because I cannot stay asaslave at other foreign countries when i getting old , so it is better to live at our mother land and i will try to make friend with Myanmar authorities. Everywhere got their internal affairs .No where can be perfect .:P
Keep motherland and fatherland craps for politicians. There will always be suckers. Those who are left behind are 'nwars(cows)' or 'khway aarh (jackals)' feasting
on those submissive and stupid cows. We humans voted with our feet, we left Burma.
Living and working in another country is not being enslaved because you are getting paid for your labor. If you want to get
representation, you apply for citizenship. If you have become the citizen, you will get same rights. If not kick asses of politicians, shame them, shout loud. Like what they did in US,
now Democrats haveawiggled
့မြန်မာပြည်ကို ချစ်သော အခွင့်အရေးသမား ကိုကိုစာလုံး သာကူးများအား လေးစားပါသည်။
I,my family and all people who are achiever support MYANMAR's ELECTION 100%.
It's the real chance for Myanmar people to saved from inferior life due to the NOBEL Prize Laureate Suu Kyi and non achiever party.
Ladies & Gentlemen in pictures you are enough to apply Asylum showing these pictures.
But don't forget there's no ShortCut to success...
If you got chance to stay in develoved countries by refugee status,you'll have to struggle for PUB,car,home loan installments.No time to do this again probably on holidays for some free food.
Chinese and Indians can migrate and easily get VISA to developed western countries under normal processing.they are all well educated and respected.
But Myanmar citizens who are specially loved and take cared by these developed countries can't get VISa under normal processing.
But REFUGEE status is Ok for some when they condemn their own country disgrace.
It's called DISCRIMINATION base on country status.
So?still shout until your generation becomes.......
it's named DEMOCRACY?
Authentic Patriotic said...
အင်တာနက်ခောတ်ကြီးမှာ မသိချင်ယောင်ပဲ ဆောင်သလိုလို၊ သတင်းအမှောင်ပဲ ချထားခံရနေသလိုနဲ့ရူးကြောင်မူးကြောင် ၀ါဒကြိုးစားဖြန့် နေသူက ရှိသေးတယ်။ တော်တော်ထိရောက်တဲ့ မီဒီယာတိုက်ပွဲ။
Hi Mr Citizen ,
Are u sure to get same rights once u convert citizen ? Whether u can change ur appearance and language once convert ur IC color ? You may know , what i point out .Frankly speaking, i don't dare to convert because i can speak only E & my own MT , cannot speak other dialects .U r very brave man !!! Cheers !! :P :) ^_^
'Hi Mr Citizen ,
Are u sure to get same rights once u convert citizen ? Whether u can change ur appearance and language once convert ur IC color ? You may know , what i point out .Frankly speaking, i don't dare to convert because i can speak only E & my own MT , cannot speak other dialects .U r very brave man !!! Cheers !! :P :) ^_^'
If you were referring Singapore, it is not the only country in the world. There are so many English speaking nations: UK, US, Canada,
Australia, NZ, and Ireland.
Even in Singapore, an English speaking foreigner can go further than an illiterate Chinese who speaks only Hokkien, Hakka, etc.. Not all those old people in Singapore can speak Mandarin. It
is not that hard to learn new language, if you migrate to Brazil, you can learn Portugese from Brazilian chicks, or Spanish from Argentine chicks or learn Chinese from PRC tutor girls if you are in Singapore.
i want to participate but i dint get that information. so how to get that information for next time?
come read this blog regularly..then you will know.